MADAGASCAR ORCHESTRA: Hanomboka ny zoma 17 septambra ho avy izao ny taom-pitendrena 2021 – Madatopinfo
Ho fampiroboroboana ny mozika klasika eto amintsika, dia manomana kaonseritra ho an’ny mpankafy izany ny Madagascar Orchestra. Am-polony ny kaonseritra hotanterahin’ity fikambanana ity mandrapahatapitry ny taona 2021. Noho ny olana ara-pahasalamana izay niseho teto amin’ny firenena anefa dia voatery nahemotra ny volana septambra ho avy io ny taom-pitendrena 2021 ho an’ny Madagascar Orchestra, izay nokasaina notanterahana ny volana marsa lasa teo. Ny zoma 17 septambra ho avy izao eny amin’ny Carlton Madagascar no hanombohana izany taom-pitendrena izany amin’ity taona ity araka ny fampahafantarana notanterahan’izy ireo teny Anosy ny zoma lasa teo. Hampiavaka ity kaonseritra ity ny fampisehoana arahina fiaraha-misakafo. Manodidina ny haitao ara-tsakafo, dihy, literatiora miampy mozika araka izany no hiseho amin’io fotoana io. Raha ny nambaran’ny mpikambana ao anatin’ny Madagascar Orchestra dia efa amam-bolana maro no nanomanana ny kaonseritra ho fanomezana fahafaham-po ny olona. Hivoaka tsy ho ela ihany koa ny tapakila raha ny fanazavana hatrany. Tsiahivina moa fa ny Madagascar Orchestra dia fikambanana iray ahitana mpitendry zavamaneno sy mpanao mozika ary olon-tsotra misehatra eo amin’ny tontolon’ny kolontsaina eto Madagascar. Ny fikambanana dia mikatsaka hatrany ny kalitao lafatra ho an’ny zavakanto, indrindra ny mozika, amin’ny alalan’ny asa voakaly, mitohy sy maharitra.